गृहमन्त्री फेर्न प्रचण्डको कसरत, प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? | NepalDut
गृहमन्त्री फेर्न प्रचण्डको कसरत, प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार ५ गते पोखरा पुगेर भने- संसदबाट बजेट पारित भएलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन सक्छ।
पोखरा र चितवनका दुबै कार्यक्रमबाट प्रचण्डले दिन खोजेका सन्देश प्रष्ट थिए- पहिलो, आफू पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवादमै छु। दोस्रो, आफूहरू पूर्वसहमतिमा प्रतिवद्ध नै छौं र सहमतिअनुसार म प्रधानमन्त्री हुन्छु। सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डले पछिल्ला केही सातादेखि जे भनिरहेका छन्, जे गरिरहेका छन् त्यसबाट उनमा एक प्रकारको छटपटी देखिन्छ।
प्रचण्डको यो छटपटीबीच प्रधानमन्त्री ओली भने मौन देखिएका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि कम आउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारभित्र केही नगरी भने बसेका छैनन्। अहिले उनले बालुवाटारमै सक्रियता बढाएका छन्। उनको सक्रियता पार्टीभित्र आफू बलियो बन्न केन्द्रीत छ।
प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदैछ भनेर पोखरामा असार ५ गते शुक्रबार बोलेका थिए। मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने पालो त्यसपछि आउने सोमबार थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट बैठक आइतबार नै डाके। सरकारी कामको कुनै ‘इमर्जेन्सी’ परेर होइन, मन्त्रीहरूलाई आश्वस्त पार्न।
एक मन्त्रीका अनुसार क्याबिनेट बैठकमा उनले मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्ने आफ्नो कुनै योजना नरहेको बताए। मन्त्रीहरूलाई उनले आश्वासन दिए- ढुक्क भएर काम गर्नोस्, क्याबिनेट फेर्दिनँ।
उनको यो आश्वासन मूलत: पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूतर्फ लक्षित थियो। पूर्वमाओवादीका धेरै मन्त्रीलाई प्रचण्डले कहिले आफूहरूलाई हटाइदेलान् भन्ने संशय छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफूलाई छाडेर ओलीतिर लागेको आशंकामा उनलाई हटाउने प्रयास प्रचण्डले गरिसकेका छन्। गृहमन्त्री थापा निकटस्रोत भन्छ-उहाँलाई हटाउन प्रचण्ड बालुवाटार गएर तीन पटक प्रधानमन्त्रीलाई भनिसक्नुभयो।
ओली र प्रचण्डबीच सत्तालाई लिएर मतभेद बढदै जाँदा पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका धेरैले प्रचण्डलाई सार्वजनिक रूपमा साथ दिएका छैनन्। उनले प्रयत्न नगरेका भने होइनन्।
गृहमन्त्री थापा, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई आफ्नो निवास खुमलटारमै बोलाएर प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा बोल्न अनुरोध गरेका छन्। स्रोत भन्छ, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकाहरूलाई बारम्बार खुमलटार बोलाएर अब राजनीतिक कार्यदिशा र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलगायत विषयमा आफ्नो लाइनको कुरा बोल्न आग्रह गरिसक्नुभएको छ।’
गृहमन्त्री थापा त यो साता दुई दिन प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे। उनका कुरा सुने। तर प्रचण्डले भनेझैं पार्टी र सरकारका बारेमा ‘चुँ’ सम्म गरेनन्। शनिबार बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच रस्साकसी हुँदा माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालले प्रचण्लाई साथ दिए। ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले ओलीका पक्षमा बोले।
बादल भने मुसुमुसु हाँसेर बसे। कसैको पक्षमा बोलेनन्। ‘प्रचण्डजी बादललाई गृहमन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ भन्दै तीन पटकसम्म बालुवाटार जानुभयो, यता बादललाई बोलाएर आफ्नो पक्षमा बोल्नुस् भन्नुहुन्छ, उहाँको विश्वास कसरी गर्ने?,’ बादल निकट नेताले भने।
उनले आफूनजिकका मन्त्रीहरूमार्फत् यो सरकार पाँचै वर्ष टिक्छ भन्ने सन्देश दिँदै आएका छन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलगायत प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै हुनु पर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद फेर्न नहुने लगायतका कुरा लगातार बाहिर लगेका छन्।
यहाँसम्म कि उनी आफूले सम्हालेका मन्त्रालयबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि गएनन्, अर्थमन्त्री खतिवडालाई आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिन लगाए। प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो ‘उहाँ आन्तरिक परामर्शमा हुनुहुन्छ, सरकारको कामभन्दा पार्टीमा धेरै केन्द्रीत हुनुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्री एकदम जरूरी बैठकबाहेक सरकारी कामकारबाहीका बैठकमा पनि सहभागी हुन छाडेका छन्। त्यो समय बरू पार्टीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूसँगको भेटका लागि छुट्याएका छन्। बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘दिनहुँ पाँच सात जना सांसद त प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुग्छन्, छलफल गर्छन्, बाहिरको माहौलबारे प्रधानमन्त्रीले उनीहरूसँग बुझ्नुहुन्छ।’
पार्टीभित्रको यो शक्ति सन्तुलनलाई ओलीले बदल्ने प्रयत्न गरेका छन्। पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास त्यसैको एउटा कडी हो। यसले नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष अझ गहिरो हुने संकेत गर्छ। (यो समाचार सेतोपाटी अनलाइनबाट साभार गरिएको हो ।)